ဦးစည်သူအောင်မြင့်နဲ့ မထက်ထက်ခိုင်တို့ ရှေ့တပတ် ရုံးချိန်း
၀၉ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၁
သြဂုတ်လ (၁၅)ရက်က အဖမ်းခံရသည့် သတင်းစာဆရာ ဦးစည်သူအောင်မြင့်နှင့် BBC Media Action "ခံစားကြည့်" အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ မထက်ထက်ခိုင် (RSF photo)
ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅(က)နဲ့ ၁၇/၁ တို့အရ စွဲဆိုခံထားရတဲ့ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း ဆောင်းပါးရှင် ဦးစည်သူအောင်မြင့်နဲ့ BBC Media Action "ခံစားကြည့်" အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ မထက်ထက်ခိုင်တို့ကို မူလက စွဲဆိုထားတဲ့ မြို့နယ်တွေအပြင် မြို့နယ်သစ်တွေမှာလည်း အလားတူအမှုတွေနဲ့ ထပ်မံ စွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ အခုအခါ အင်းစိန်ထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းထားပြီဖြစ်တဲ့ သူတို့အမှုရဲ့ နောက်လာမယ့် ရုံးချိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတွေရဲ့ ပြောကြားချက် - ရန်ကုန်ကလာတဲ့ သတင်းကို ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီက ဧည့်စာရင်း ဝင်စစ်ရာကနေ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံ-ရိပ်မွန် အိမ်ယာ တိုက်ခန်းတခုမှာ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းရဲ့ ဆောင်းပါးရှင် ဦးစည်သူ အောင်မြင့်နဲ့ BBC Media Action ရဲ့ ခံစားကြည့် အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ မထက်ထက်ခိုင်တို့ကို အခုတော့ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် ပို့လိုက်ပြီလို့ မထက်ထက်ခိုင်ရဲ့ ရှေ့နေက ပြောပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က အင်းစိန်ထောင်ကို ပို့စဉ်မှာ မိသားစုနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ မထက်ထက်ခိုင်တို့ကို တခြားမြို့နယ်တွေကပါ အမှုတွေ ထပ်တိုးပြီး တရားစွဲဆိုထားတာတွေ ရှိတယ်လို့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်မြင့်က ပြောပါတယ်။
" ထက်ထက်ခိုင်ကိုကျတော့ ဗဟန်းမှာ ၅၀၅-က နဲ့စွဲတယ်။ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မှာ ၁၇/၁ နဲ့စွဲတယ်။ ၅၀၅-က နဲ့စွဲတာက ဆရာစည်သူအောင်မြင့်ကို ၅၀၅-ကနဲ့ အမိန့်ထုတ်တာကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာကို လက်ခံတဲ့ အတွက် စွဲတယ်။ ၁၇/၁ ကျတော့သူက NUG ရေဒီယိုမှာ အကူအညီပေးတဲ့ အတွက်လို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့တွေ့လို့ပြောတာက သူကNUG မဟုတ်ဘူး။ ၄လပိုင်းကစပေါ်တဲ့ အထွေ ထွေ သပိတ်ကော်မတီကလုပ်တဲ့ ဖက်ဒရယ် FM မှာသူ တနင်္ဂနွေ ၂ရက်လောက်သွားကူညီပေးဖူးတယ် ပေါ့။ အဲဒါကိုသူအကြိမ်ကြိမ်ရှင်းပြပေမယ့် သူလက်မခံဘဲနဲ့ ၈လပိုင်းမှာပေါ်တဲ့ NUG FM မှာ လုပ်တယ် ဆိုပြီး ၁၇/၁နဲ့စွဲတာ။ အဲဒါကတော့ ဘာမှခြေခြေမြစ်မြစ်မရှိတော့ ဆရာတို့ အလွယ်ကျော်လွှားနိုင်မှာပါ။ ၅၀၅-ကနဲ့ ဆရာစည်သူအောင်မြင့်ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတာကို သူဌားတဲ့ အိမ်မှာနေခွင့်ပြုတာကို တော့ ဆရာတို့ ရုန်းကန်ရမှာပေါ့။ "
မထက်ထက်ခိုင်ကို ပုဒ်မ ၂ ခုတပ်ပြီး စွဲထားတာမှာ ဗဟန်းမှာ စွဲဆိုထားတဲ့ ၅၀၅-က အမှုအတွက် လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ကို ရုံးချိန်းပေးထားပြီး ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မှာ စွဲထားတဲ့ ပုဒ်မ ၁၇/၁ အမှုအတွက် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ကို ရုံးချိန်း ပေးထားတယ်လို့ ဦးခင်မောင်မြင့်က ပြောပါတယ်။
ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းရဲ့ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် ဦးစည်သူအောင်မြင့်ကိုတော့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း VOA သတင်းဌာနနဲ့ Frontier Myanmar သတင်းဌာနတွေကတဆင့် တပ်မတော်နဲ့ အိမ်စောင့်အစိုးရအပေါ် မတရား ဝေဖန် ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတွေ ရေးသားပေးပို့ခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ၊ မကြာသေးခင်က တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန် ထားပါတယ်။
ဦးစည်သူအောင်မြင့်ရဲ့ ရှေ့နေ ဒေါ်နှင်းဝင်းအောင်ကလည်း လက်ရှိ ဦးစည်သူအောင်မြင့် အခြေအနေကို ခုလိုပြောပြလာတာပါ။
" ကျမတို့ ၃ရက်နေ့ကလေ ၃ရက်နေ့ကအမှုစွဲတင်ပြီပေါ့နော်. ပုဒ်မ ၅၀၅-ကနဲ့ ဗဟန်းရုံးမှာ အမှုစွဲတင်တယ်။ တွေ့ခွင့်ရလိုက်တယ်။ ကျမတို့ပါဝါတင်တာတွေဘာတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့ ရုံးချိန်းက ၁၇ရက်နေ့ပြန်ချိန်းတယ်။ ပုစွန်တောင်ရုံးမှာလဲဘဲ ပုစွန်တောင်မှာ အမှု စွဲတာရှိတယ်။ ၅၀၅-ကနဲ့ဘဲ ဒါပေမယ့် သူက ရမန်မယူရသေးဘူး။ တရားရုံးအမှုမစွဲတင်သေးဘူး တရားရုံးအမှုစစ်ပေါ့။ သူနဲ့ တွေ့တော့ သူက ရုံးဖွင့်တဲ့ ရက်ကျမှ တင်လို့ရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရမန်ယူထားတာမရှိလို့လို့ပြော ပါတယ်။ ၂ မှုဖြစ်တယ်။ ပုစွန်တောင် တမှု ဗဟန်းမှာတမှု။ ပုစွန်တောင်ကတမှုပေါ့။ "
သူတို့နှစ်ဦးကို စွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မတွေထဲက ပုဒ်မ ၅၀၅-က ဟာ တပ်မတော်ကို အကြည်ညိုပျက်အောင် လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်ပြီး ပြစ်မှု ထင်ရှားတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ရင် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ထက်မနည်း ကျခံရနိုင်ကာ ငွေဒဏ်လည်း ပေးဆောင်ရမယ်လို့ ဥပဒေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ မထက်ထက်ခိုင်ကို စွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မ ၁၇/၁ ဟာ မတရားအသင်းနဲ့ ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မဖြစ်ပြီး ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ရင် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ထက်မနည်း ၊ ၃ နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ကို ချမှတ်နိုင်သလို ငွေဒဏ်ပါ ချမှတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်တဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကတည်းက ပြည်တွင်းမီဒီယာ (၈)ခုကို တရာဝင်ထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်သိမ်းခဲ့သလို၊ သတင်းသမားတွေကို ဖမ်းဆီးတာ၊ တရားစွဲဆိုတာတွေ ပြုလုပ်နေတာပါ။ သတင်းသမား အယောက် ၅၀ ထက်မနည်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံထားရပြီး အခုလို နောက်ထပ် သတင်းသမားတချို့ပါ ထပ်မံ အရေးယူခံနေရပါတယ်။
AAPP နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းတွေအရ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး အဖမ်းဆီးခံထားရဆဲ (၆၃၀၀) ကျော်ရှိပြီး ၊ ဖမ်းဝရမ်း အထုတ်ခံ ထားရသူကတော့ ၂၀၀၀ နီးပါး ရှိတယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စစ်ကောင်စီရဲ့ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းမှုအတွင်း သေဆုံးခဲ့သူ (၁၀၅၄)ဦး ရှိသွားပြီလို့ ဖော်ပြထားတာပါ။ AAPP က ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းဟာ ချဲ့ကားဖေါ်ပြခြင်းသာ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်ကောင်စီဖက်က ပြောပေမယ့် ၊ AAPP ကတော့ သေဆုံး ဖမ်းဆီးခံရသူ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အတည်ပြုပြီး ကောက်ခံထားတဲ့ စာရင်းလို့ တုန့်ပြန်ထားပါတယ်။
ဦးစညျသူအောငျမွငျ့နဲ့ မထကျထကျခိုငျတို့ ရှတေ့ပတျ ရုံးခြိနျး
ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၅၀၅(က)နဲ့ ၁၇/၁ တို့အရ စှဲဆိုခံထားရတဲ့ ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး ဆောငျးပါးရှငျ ဦးစညျသူအောငျမွငျ့နဲ့ BBC Media Action "ခံစားကွညျ့" အစီအစဉျတငျဆကျသူ မထကျထကျခိုငျတို့ကို မူလက စှဲဆိုထားတဲ့ မွို့နယျတှအေပွငျ မွို့နယျသဈတှမှောလညျး အလားတူအမှုတှနေဲ့ ထပျမံ စှဲဆိုလိုကျပါတယျ။ အခုအခါ အငျးစိနျထောငျမှာ ထိနျးသိမျးထားပွီဖွဈတဲ့ သူတို့အမှုရဲ့ နောကျလာမယျ့ ရုံးခြိနျးတှနေဲ့ပတျသကျလို့ အကြိုးဆောငျ ရှနေ့တှေရေဲ့ ပွောကွားခကျြ - ရနျကုနျကလာတဲ့ သတငျးကို ကိုဉာဏျဝငျးအောငျက တငျပွမှာ ဖွဈပါတယျ။
စဈကောငျစီက ဧညျ့စာရငျး ဝငျစဈရာကနေ ဗဟနျးမွို့နယျ၊ ရှဂေုံ-ရိပျမှနျ အိမျယာ တိုကျခနျးတခုမှာ သွဂုတျလ ၁၅ ရကျနကေ့ ဖမျးဆီးခံလိုကျရတဲ့ ဗီအိုအမွေနျမာပိုငျးရဲ့ ဆောငျးပါးရှငျ ဦးစညျသူ အောငျမွငျ့နဲ့ BBC Media Action ရဲ့ ခံစားကွညျ့ အစီအစဉျ တငျဆကျသူ မထကျထကျခိုငျတို့ကို အခုတော့ အငျးစိနျအကဉျြးထောငျ ပို့လိုကျပွီလို့ မထကျထကျခိုငျရဲ့ ရှနေ့ကေ ပွောပါတယျ။ စကျတငျဘာ ၃ ရကျနကေ့ အငျးစိနျထောငျကို ပို့စဉျမှာ မိသားစုနဲ့ တှခေဲ့ရတယျလို့ပွောပါတယျ။ မထကျထကျခိုငျတို့ကို တခွားမွို့နယျတှကေပါ အမှုတှေ ထပျတိုးပွီး တရားစှဲဆိုထားတာတှေ ရှိတယျလို့ အကြိုးဆောငျရှနေ့ေ ဦးခငျမောငျမွငျ့က ပွောပါတယျ။
" ထကျထကျခိုငျကိုကတြော့ ဗဟနျးမှာ ၅၀၅-က နဲ့စှဲတယျ။ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မှာ ၁၇/၁ နဲ့စှဲတယျ။ ၅၀၅-က နဲ့စှဲတာက ဆရာစညျသူအောငျမွငျ့ကို ၅၀၅-ကနဲ့ အမိနျ့ထုတျတာကို ဖမျးဝရမျးထုတျတာကို လကျခံတဲ့ အတှကျ စှဲတယျ။ ၁၇/၁ ကတြော့သူက NUG ရဒေီယိုမှာ အကူအညီပေးတဲ့ အတှကျလို့ ပွောတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူနဲ့တှလေို့ပွောတာက သူကNUG မဟုတျဘူး။ ၄လပိုငျးကစပျေါတဲ့ အထှေ ထှေ သပိတျကျောမတီကလုပျတဲ့ ဖကျဒရယျ FM မှာသူ တနင်ျဂနှေ ၂ရကျလောကျသှားကူညီပေးဖူးတယျ ပေါ့။ အဲဒါကိုသူအကွိမျကွိမျရှငျးပွပမေယျ့ သူလကျမခံဘဲနဲ့ ၈လပိုငျးမှာပျေါတဲ့ NUG FM မှာ လုပျတယျ ဆိုပွီး ၁၇/၁နဲ့စှဲတာ။ အဲဒါကတော့ ဘာမှခွခွေမွေဈမွဈမရှိတော့ ဆရာတို့ အလှယျကြျောလှားနိုငျမှာပါ။ ၅၀၅-ကနဲ့ ဆရာစညျသူအောငျမွငျ့ကို ဖမျးဝရမျးထုတျထားတာကို သူဌားတဲ့ အိမျမှာနခှေငျ့ပွုတာကို တော့ ဆရာတို့ ရုနျးကနျရမှာပေါ့။ "
မထကျထကျခိုငျကို ပုဒျမ ၂ ခုတပျပွီး စှဲထားတာမှာ ဗဟနျးမှာ စှဲဆိုထားတဲ့ ၅၀၅-က အမှုအတှကျ လာမယျ့ စကျတငျဘာ ၁၆ ရကျနကေို့ ရုံးခြိနျးပေးထားပွီး ၊ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မှာ စှဲထားတဲ့ ပုဒျမ ၁၇/၁ အမှုအတှကျ စကျတငျဘာ ၁၇ ရကျနကေို့ ရုံးခြိနျး ပေးထားတယျလို့ ဦးခငျမောငျမွငျ့က ပွောပါတယျ။
ဗီအိုအမွေနျမာပိုငျးရဲ့ ပငျတိုငျဆောငျးပါးရှငျ ဦးစညျသူအောငျမွငျ့ကိုတော့ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး VOA သတငျးဌာနနဲ့ Frontier Myanmar သတငျးဌာနတှကေတဆငျ့ တပျမတျောနဲ့ အိမျစောငျ့အစိုးရအပျေါ မတရား ဝဖေနျ ဆနျ့ကငျြတိုကျခိုကျတဲ့ သတငျးဆောငျးပါးတှေ ရေးသားပေးပို့ခဲ့တဲ့အတှကျဆိုပွီး ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျးလိုကျတာဖွဈကွောငျး ၊ မကွာသေးခငျက တပျမတျောသတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့က သတငျးထုတျပွနျ ထားပါတယျ။
ဦးစညျသူအောငျမွငျ့ရဲ့ ရှနေ့ေ ဒျေါနှငျးဝငျးအောငျကလညျး လကျရှိ ဦးစညျသူအောငျမွငျ့ အခွအေနကေို ခုလိုပွောပွလာတာပါ။
" ကမြတို့ ၃ရကျနကေ့လေ ၃ရကျနကေ့အမှုစှဲတငျပွီပေါ့နျော. ပုဒျမ ၅၀၅-ကနဲ့ ဗဟနျးရုံးမှာ အမှုစှဲတငျတယျ။ တှခှေ့ငျ့ရလိုကျတယျ။ ကမြတို့ပါဝါတငျတာတှဘောတှေ လုပျခဲ့ပွီးပွီပေါ့ ရုံးခြိနျးက ၁၇ရကျနပွေ့နျခြိနျးတယျ။ ပုစှနျတောငျရုံးမှာလဲဘဲ ပုစှနျတောငျမှာ အမှု စှဲတာရှိတယျ။ ၅၀၅-ကနဲ့ဘဲ ဒါပမေယျ့ သူက ရမနျမယူရသေးဘူး။ တရားရုံးအမှုမစှဲတငျသေးဘူး တရားရုံးအမှုစဈပေါ့။ သူနဲ့ တှတေ့ော့ သူက ရုံးဖှငျ့တဲ့ ရကျကမြှ တငျလို့ရမယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရမနျယူထားတာမရှိလို့လို့ပွော ပါတယျ။ ၂ မှုဖွဈတယျ။ ပုစှနျတောငျ တမှု ဗဟနျးမှာတမှု။ ပုစှနျတောငျကတမှုပေါ့။"
သူတို့နှဈဦးကို စှဲဆိုထားတဲ့ ပုဒျမတှထေဲက ပုဒျမ ၅၀၅-က ဟာ တပျမတျောကို အကွညျညိုပကျြအောငျ လုပျဆောငျမှု ဖွဈပွီး ပွဈမှု ထငျရှားတယျလို့ ဆုံးဖွတျရငျ ထောငျဒဏျ ၂ နှဈထကျမနညျး ကခြံရနိုငျကာ ငှဒေဏျလညျး ပေးဆောငျရမယျလို့ ဥပဒမှော ဖျောပွထားပါတယျ။ မထကျထကျခိုငျကို စှဲဆိုထားတဲ့ ပုဒျမ ၁၇/၁ ဟာ မတရားအသငျးနဲ့ ဆကျသှယျမှု ပုဒျမဖွဈပွီး ပွဈမှုထငျရှားခဲ့ရငျ ထောငျဒဏျ ၂ နှဈထကျမနညျး ၊ ၃ နှဈထကျမပိုသော ထောငျဒဏျကို ခမြှတျနိုငျသလို ငှဒေဏျပါ ခမြှတျနိုငျတာဖွဈပါတယျ။ သူတို့ နှဈဦးစလုံးကို နှဈရှညျထောငျဒဏျ ခမြှတျနိုငျတဲ့ ပုဒျမတှနေဲ့ တရားစှဲဆိုထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ရကျနေ့ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျးကတညျးက ပွညျတှငျးမီဒီယာ (၈)ခုကို တရာဝငျထုတျဝခှေငျ့ ပိတျသိမျးခဲ့သလို၊ သတငျးသမားတှကေို ဖမျးဆီးတာ၊ တရားစှဲဆိုတာတှေ ပွုလုပျနတောပါ။ သတငျးသမား အယောကျ ၅၀ ထကျမနညျး ဖမျးဆီးထိနျးသိမျး ခံထားရပွီး အခုလို နောကျထပျ သတငျးသမားတခြို့ပါ ထပျမံ အရေးယူခံနရေပါတယျ။
AAPP နိုငျငံရေးအကဉျြးသားမြား ကူညီစောငျ့ရှောကျရေးအသငျးရဲ့ ထုတျပွနျတဲ့ စာရငျးတှအေရ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျ နိုငျငံရေးနဲ့ ဆကျနှယျပွီး အဖမျးဆီးခံထားရဆဲ (၆၃၀၀) ကြျောရှိပွီး ၊ ဖမျးဝရမျး အထုတျခံ ထားရသူကတော့ ၂၀၀၀ နီးပါး ရှိတယျလို့ ဖျေါပွထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စဈကောငျစီရဲ့ အကွမျးဖကျ နှိမျနငျးမှုအတှငျး သဆေုံးခဲ့သူ (၁၀၅၄)ဦး ရှိသှားပွီလို့ ဖျောပွထားတာပါ။ AAPP က ထုတျပွနျတဲ့ စာရငျးဟာ ခြဲ့ကားဖျေါပွခွငျးသာ ဖွဈတယျလို့ စဈကောငျစီဖကျက ပွောပမေယျ့ ၊ AAPP ကတော့ သဆေုံး ဖမျးဆီးခံရသူ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ အတညျပွုပွီး ကောကျခံထားတဲ့ စာရငျးလို့ တုနျ့ပွနျထားပါတယျ။
“မတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးပါ”( ဗွီအိုအေဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း)
သတင်းမီဒီယာအပါအ၀င် မြန်မာ့ဒီမိုကရက်တစ်အင်စတီကျူးရှင်းတွေကို ပစ်မှတ်ထားဖြိုခွဲ - နေသန်မောင်